Kedu ihe bụ Brand? | Martech Zone
Ọ bụrụ na m ga-ekweta ihe ọ bụla banyere nọrọ afọ iri abụọ na ahịa, ọ bụ eziokwu na m na-aghọtachaghị mmetụta nke a brand gafee mbọ niile a na-agba n’ahịa. Ọ bụ ezie na nke ahụ nwere ike ịdị ka nkwupụta na-enweghị isi, ọ bụ n'ihi nuance nke ịmepụta ụdị ma ọ bụ mbọ dị egwu na ịhazigharị echiche nke ika siri ike karịa ka m chere.
Iji see ihe atụ, nke ya na ya ga-abụ ọkwá nkà na-arụ ọrụ n'ụlọ. Ọkwá nkà ahụ nwere ike ịghọta otú e si arụ mgbidi, otú e si arụ oche, tinye ọnụ na ihe ndị dị mkpụbelata, otú e si arụ ụlọ, jirikwa ya rụọ ụlọ malite na ntọala ya. Mana ọ bụrụ na ntọala ahụ enweghị isi ma ọ bụ gbawara agbawa, ọ ga-ama na ihe adịghị mma mana ọ ghọtaghị otu esi edozi nsogbu ahụ. Na nsogbu ga-emetụta ihe niile ọ na-arụ ọrụ na.
Ahụmahụ na nghọta nke ngwaahịa ma ọ bụ ụlọ ọrụ nwere otu aha, dị ka enyere site na njirimara njirimara, atụmatụ ndị ọzọ, na olu ndị na-anọchi anya ya.
Ọ bụ ya mere anyị ji ebubata ndị na - enye ndụmọdụ maka akara n’ime ọrụ anyị n’oge a mgbe anyị jụrụ ajụjụ ole na ole ma anyị enweghị ike ị nweta azịza doro anya tupu anyị amalite ịzụlite usoro ịzụ ahịa maka ndị ahịa:
Kedu ka esi ele ndị anya gị na ahịa gị anya maka anya gị?
Kedu onye bụ onye ahịa na onye na-eme mkpebi maka ịzụ ahịa na akara gị?
Kedu ihe na-eme ka ị dị iche na ndị asọmpi gị? Kedụ ka esi ahụ gị iji tụnyere ndị asọmpi gị?
Kedụ ụda nke ọdịnaya gị na atụmatụ eji iji kọọrọ ndị ahịa gị atụmanya gị nke ọma?
Ọ bụrụ n’ileru anya n’ajụjụ ndị ahụ, ọ ga-abụ ihe pere mpe banyere ihe ịchọrọ ị mepụta na ihe ndị ọzọ gbasara otu esi ekepụta ihe ị mepụtara. Dị ka vidiyo ahụ na-ekwu, ọ bụ ihe ndị mmadụ na-eche banyere gị na ọkwa mmetụta uche.
Vidio a si Borshoff bịara na-ajụ ma na-aza ajụjụ na vidiyo a site na afọ ole na ole gara aga mgbe ha gafere aha, Gịnị bụ na a Brand?
Na otutu doo nke dijitalụ media - gụnyere mmadụ mgbasa ozi, testimonials, na-akparaghị ókè ọdịnaya - ụdị nwere nnọọ ike oge ịnọgide na-enwe aha ha, ịrụzi aha ha, ma ọ bụ na-eme mgbanwe ha ika. Ihe niile ị mepụtara ma ọ bụ nke onye ọzọ mepụtara maka ngwaahịa, ọrụ gị, ụlọ ọrụ gị, na ndị mmadụ na-emetụta akara gị.
Tags: gị n'ụlọngaOkechukwubrandahia ahiaika udeika ahambọnKedu ihe bụ ika